जहाँ बेंटले सिभिल क्षेत्रको साथ जाँदै छ - जिओफुमाडास
मे, 2010 इन्जिनियरिङ, Microstation-बेन्टले, topografia
वाह, विषय धेरै दिखावापूर्ण छ, मँ कतै मैले बुझ्न सक्ने कुरामा ध्यान दिन चाहान्छु। मैले कोसिस गर्न थालेको थियो Geopak को बारे मा कुरा गर्नुहोस, तर अब यो कि पावरक्रिभी भर्खरै आइपुगेको छ, यसले मलाई संसारलाई बचाउँछ, मलाई साबित गर्न चाहन्छु कि सबै कुरा यो भन्छ यति धेरै सत्य हो।
बेंटले पहिले ...
यदि त्यहाँ योग्यता छ कि Bentley छ, यो ईन्जिनियरिंग को क्षेत्र हो। इन्टेग्राफको इतिहास लामो छ यस अर्थमा, 70 वर्ष पछि, त्यहाँ ईन्जिनियरिङ् समाधान थिए मुख्य फ्रेमहरू, त्यस नाम संग माइक्रोस्टेशन थियो त्यहाँ देखि पहिले त्यहाँ Civ3D थियो, र न त बेंटेली र न AutoDesk.
यी सबै ईन्जिनियरिङ् उत्पादनहरू क्रमशः एकमा समेटिएका थिए sancocho निम्न वा कम संक्षेपमा निम्नानुसार:
InRoads। यसमा छ स्वादहरू थिए:
-इंटरलोड साइट सूट
इन्टर लोड साइट
-InRoads तूफान र सेनेटरी
Geopak। यो संस्करणको यी संस्करणहरू थिए:
-Geopak सिविल ईन्जिनियरिङ् सुइट
एमएक्स। यो एक रमाईलो संस्करण हो जुनसँग सबै थोक थियो, र त्यो अंग्रेजी वातावरणको लागि बढी हो, त्यसैले यो मुख्यतया इ England्ल्यान्ड र भारतले लागू गरेको हो। सँधै सडक डिजाइनतिर उन्मुख, AutoCAD मा चल्दै। यो AutoCAD २०० of को संस्करणहरूको लागि पनि अवस्थित छ - मलाई थाहा छैन कि त्यो रोमान्स जारी रहनेछ - अब यो माइक्रोस्टेशनको लागि अवस्थित छ र भर्खरका संस्करणहरू हरेक दिन यो InRoad जस्तै देखिन्छ। यसले हामीलाई अंग्रेजी मित्रहरूको पोष्टलाई अझ राम्रोसँग बुझ्न गर्दछ जुन सिभिल थ्रीडीको साथ एमएक्स तुलना गर्दछ।
यदि हामी हेर्न चाहन्छौं कि बेंटले कसरी ईन्जिनियरि area क्षेत्रमा आफैं पोख्त भए, हामीले संयुक्त राज्यको यो नक्सा अवश्य देख्नु पर्छ। यो यातायात विभागहरूको बारेमा हो: २ of राज्यले हाल InRoad (%२%), १ Ge Geopak (% 26%) र २ MX (%%) प्रयोग गर्दछ।
सशस्त्र बल ईन्जिनियर कर्प्स को मामला केहि हद सम्म समान छ, 23 राज्यहरु Inroads को उपयोग गर्दछ, र4MX को उपयोग गर्दछ।
कसरी बेंटले आफैले पोषण गर्न आउँथ्यो, यसको योग्यता हो Intergraph, जो वर्ष 2000 को डिसेम्बर सम्म इनआरड्स को मालिक थिए, जब बेंटेली मा भरी जान्छ र स्पष्ट हो, प्रयोगकर्ता पोर्टफोलियो।
इन्टेग्राफको समयमा, InRoad सहित काम गरे IntelliCADअर्को दिन मैले माइक्रोस्टेशन on on मा आकर्षणको रूपमा चालु संस्करण फेला पारे, जिज्ञासु छ कि मान्छे भन्छ कि ऊ त्यहाँबाट सर्दैन किनकि ऊ धेरै खुसी छ। बेंटलेका लागि राम्रो छ, किनभने मलाई लाग्दैन कि म यस्तो अट्टेरी उपयोगकर्तालाई AutoCAD R95 प्रयोग गरेर फेला पार्न सक्छ।
लैटिन अमेरिकाको स्तरमा, ब्राजिलको गणना नगर्ने कि अन्य बाँकी छन्, उनीहरूले InRoads को प्रयोग गरेर एक्सेल:
वाल्श पेरू (लिमा)
क्यानाडा विश्वविद्यालय लिमा
ग्राना र मोन्टो
मेडेलिनको सार्वजनिक कम्पनीहरू
Aguas del Illimani (बोलिभिया)
हालैका समयहरूमा बेंटले ...
AutoDesk पक्षमा, हामीले चाखलाग्दो घटनाहरू देख्यौं, यद्यपि समान निरन्तरताका साथ, साझेदारहरू जो जीवित छन् वा AutoDesk द्वारा खरीद गरेका कम्पनीहरूले। ईगल पोइन्ट लाइनको मामला यस्तो छ, सफ्टडेस्क, सिविलकाड, ल्याण्ड डेस्कटप, केहि नाम राख्नु। सब भन्दा भर्खरको र मलाई लाग्छ AutoDesk ले दिनेछ सिभिल3डी, जसमा AutoCAD नक्शाले के समावेश गर्दछ।
के हुन्छ यो छ कि अटोडेस्कको यसको बिभिन्न प्लेटफर्महरूमा वैश्विक स्थिति रहेको छ, अटोडेस्कले प्रस्तुत गरेको कागजातका अनुसार, विश्वमा million० लाख प्रयोगकर्ताहरूले अटोक्याडमा चल्ने केही प्रयोग गर्दछन् र ती मध्ये ,6०,००० सिभिल D डी प्रयोगकर्ता हुन्। यो अन्तिम डाटा एकदम राम्रो लाग्दछ, सायद यही कारणले बेन्टले केटासँग विकल्प छैन आनन्दित हुनुहोस् कहिले तिनीहरू उनीहरूको उल्लेख गर्छन् संग ठुलो बग (लखनऊ वाक्यांश फेसबुकमा राखिएको छ)।
अझै पनि, यो भन्न सकिन्छ कि बिएली ग्राहकहरु संग संयंत्र र ईन्जिनियरिङ् को क्षेत्र मा आफ्नो स्थिति संग प्रसन्न भएको छ धेरै धेरै ठूलो यसको नयाँ अधिग्रहण र घटनाहरू यसको विकासको दिशालाई सुदृढ पार्नको उद्देश्य हो म-मोडेल, XM (MX मा), जसको म प्रभावित भएको छ र अब मलाई सम्झना छ: STAAD को संरचनाहरु, ह्यास्टैड विधिहरु को लागि पानी र gINT को लागि जियोटेक्निक्स।
जबकि ओटोडिस्क एनिमेशन क्षेत्र मा ज्यादा शामिल भएको छ, यो सम्भव छ कि बेंलेले आफ्नो क्षेत्र को मजबूत गर्न को रूप मा यो यसको प्रौद्योगिकी को अद्यतन गर्छन।
जहाँ बेंटिले जाँदैछ ...
तपाईंले यो देख्नु भयो, मेरो लागि पनि एक दिन मेरो लागि ईनरोड्सका स्वादहरू बुझ्न गाह्रो थियो, जुन विवेकशील हुन्छ तर एउटा कारण वा अर्को एउटा संस्करण सधैं कार्यक्षमताको अभाव हुन्छ जुन केवल अन्यमा हुन्छ। तसर्थ, बेंटले यसलाई पावर सिभिल भनिन्छ, समावेश सहित:
युएसएका लागि पावरसिभिल
स्पेनको लागि पावरसिभिल
ल्याटिन अमेरिकाका लागि पावरसिभिल.
मेरो विचारमा, यो एक महान विचार, विशेष गरी किनभने माथि उपकरण मा, हुनत त्यहाँ सधैं PowerInRoads र PowerGeopak संस्करण थियो हो, बाँकी Microstation देखि एक लाइसेन्स आवश्यकता लाइसेन्स थिए।
र InRoads को भविष्य?
इनरोड्स यस क्षेत्रका पुराना प्रयोगकर्ताहरूका लागि बच्चाको बच्चा बन्न जारी रहनेछ, उनीहरूको लागि पनि जोसँग माइक्रोस्टेशन लाइसेन्स छ र केवल InRoad लिन आवश्यक छ, बिभिन्न स्वादहरू (तूफान र सेनेटरी, सर्वेक्षण) को बेफाइदाको साथ। यसका साथ नुकसान यो हो:
Inoad मा प्लेटफार्म मोडल, राम्रो छैन, कि न विलकन। प्लेटफर्महरू सबैले यसलाई प्रयोग गर्छन्, खानी, वास्तुकला, ईन्जिनियरि।। यसको पनि ड्रेनेज थिएन (अब InRoads तूफान र सेनेटरी संस्करणमा समावेश छ) र स्थलाकृति (InRoad सर्वेक्षण)।
त्यसैले, के PowerCivil के हो?
पावरसिभिलसँग ईन्जिनियरि user्ग प्रयोगकर्तालाई चाहिने सबैकुरा छ। स्पेनका लागि र ल्याटिन अमेरिकाका संस्करणहरू समान छन्, उनीहरूले ल्याउने नियमहरूमा भिन्नताका साथ संयुक्त राज्य अमेरिका हो ग्रिकोसका लागि अर्को लहर। यसैले, यदि यसलाई परिभाषित गर्न आवश्यक थियो भनेः
पावरसिभिल: यो प्लेटफार्महरू, ड्रेनेज, टोपोग्राफी, माइक्रोस्टेशन र स्पेनिशमा ईनरोडहरू हो।
Microstation को मूल्य को लागि।
हामी देख्छौं कि म यसको कार्यक्षमता कसरी समीक्षा गर्नेछु।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो रोजर Penwill, क्य्याडिस्टस को लागि हास्य
अर्को पोस्ट लैटिन अमेरिकाका लागि पावरसिभिल, पहिलो छापअर्को »